မြင်သူတိုင်းငေး‌မော ရပ်ကြည့်နေစေမယ့် ရုပ်ထု (၂၃) ခု - ONE DAILY MEDIA
ရေပေါ်ကျောက်ဆောင် ၊ ဆွဲငင်အားကို အံတုနိုင်သော ဆင်တစ်ကောင် သို့မဟုတ် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး မိုးရေစက်ကို သင်တွေ့မြင်ပါက သင့်မျက်လုံးများကို ယုံကြည်နိုင်ပါလား – မယုံနိုင်စရာ အနုပညာလက်ရာများ ရှိနေပါတယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ပန်းပုဆရာများ၏ တီထွင်ဖန်တီးမှုဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို အံ့အားသင့်စေမည့် နည်းလမ်းများကို ဘယ်တော့မှ မစဲဘဲ သင်နှင့် မိတ်ဆက်ပေးရသည့်အတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ် ။
သင့်အား လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူ အရည်အသွေးရှိအချိန်အချို့ကို သုံးစွဲရန်အတွက် အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပါတယ် ။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ စွဲမက်ဖွယ်အကောင်း? ပန်းပုရုပ်တုအချို့ကို ခံစားပြီး ၎င်းတို့၏ ပြီးပြည့်စုံမှုဖြင့် သင့်စိတ်ကို သန့်စင်ရန် ကြိုးစားပါ။
1. Rain by Nazar Bilyk, Ukraine
2. Down (no.2) by Håkon Anton Fagerås, Norway
3. A permanent installation by Daniel Popper, Modem Festival 2019, Croatia
4. Anima by Daniel Popper, Electric Daisy Festival 2019, Las Vegas
5. The Huntress by Anna, Yorkshire
6.The Kiss by Penny Hardy, Buckinghamshire
7. The Veiled Virgin by Giovanni Strazza, Rome
8. Support by Lorenzo Quinn, Venice.
9.Vestige by Rob Mulholland, Aberfoyle
A post shared by Rob Mulholland (@robmulhollandartist)
10.Loxodonta by Daniel Firman, Istanbul
11. Ferdinand I by Darius Hulea, Cluj
A post shared by Darius Hulea (@darius.hulea)
12. Frederic Storck by Darius Hulea, Cluj
13. Floating Stone by Smaban Abbas, Cairo
14. Nest Collection by Jason deCaires Taylor, Gili Islands
15. Nexus Collection by Jason deCaires Taylor, Oslo Fjord
16. Nexus Collection by Jason deCaires Taylor, Oslo Fjord
17. Totem by Ivan Lovatt
18. Skin2by Mehmet Ali Uysal, Liege
19. Inner Turmoil by Tung Ming-Chin
20. The Birth ofaNew Hero by Tung Ming-Chin
21. Jatayu by Rajiv Anchal, Kerala
A post shared by Jonny Melon | Adventure Travel (@jonny.melon)
22. Ali and Nino by Tamar Kvesitadze, Batumi
23. David Bowie by Jamie Salmon
A post shared by Jamie Salmon (@salmon.jamie)
သင်အကြိုက်ဆုံးကို ရွေးချယ်ပြီးပြီလား သို့မဟုတ် ဤလက်ရာများထဲမှ အချို့ကို လူကိုယ်တိုင်မြင်ဖူးပါသလား??
ငှက်တွေကဲ့သို့ အပေါ်ဘက်က မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကနေ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဓါတ်ပုံများ